रमेश लम्साल र हरि लामिछाने फाल्गुन १, 2074
काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता संकटका कारण निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् ।
यस्तै मस्र्याङ्दी करिडोर, मोदी करिडोर, खिम्ती करिडोरका आयोजनासमेत मर्कामा परेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनालाई रकम दिन पछिल्ला दिनमा अस्वीकार गरेका कारण ५० भन्दाबढी आयोजना समस्यामा परेको बताए ।
इपानका अनुसार १ खर्ब ४८ अर्ब रकम बैंकबाट निकासा हुन सकेको छैन । सहवित्तीयकरणमा दुई वा दुईभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको संयुक्त लगानीअन्तर्गतको कर्जा उपलब्ध नभएको हो । त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको रकम उपलब्ध गराउन बैंकहरुले नसक्ने आयोजना प्रवद्र्धकलाई जानकारी गराएका कारण गुनासो आउने क्रम बढेको अध्यक्ष गुरागार्इंको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले आगामी डेढ वर्षभित्र एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न गर्ने बताएका छन् । नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले केही आयोजनाको कर्जा प्रवाहमा समस्या आएको हुनसक्ने भए पनि सम्झौता भइसकेका परियोजनामा जटिलता नआउने बताए । उनले भने, “तरलतामा समस्या देखिएका कारण केही समय कर्जा दिन नसकिएको हुनसक्छ, सम्झौता भएको लोन दिनैपर्छ । बैंकहरुले केही समय पर्ख भनेका होलान् ।”
चट्याङ लागेर पिकनिक गएका ६ विद्यार्थी घाइते
भक्तपुर । भक्तपुरको सूर्यविनायक नपा ७ गुण्डुस्थित घ्याम्पे डाँडामा पिकनिक मनाइरहेका ६ जना शनिबार ...
विराटनगर । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–६ रमाइलो बजारमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भ...
व्यवसायी महासंघद्धारा निर्माण क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारसंग माग
काठमाडौँ । दुई तिहाइको सरकार बनेको एकवर्ष वितिसक्दा समेत निर्माण क्षेत्रको समस्या सम्बोधन नभएकामा...
ढोरपाटन सिकार आरक्षमा हिमपाका कारण दुर्लभ वन्यजन्तु मर्न थाले
काठमाडौं । लगातार हिमपात र चिसोको कारण नेपालमा पाइने दुर्लभ बँदेल, रतुवा मृग, चितुवा, नाउर, घोरल,...
राष्ट्रपतिद्वारा सोलु बहुमुखी क्याम्पसको रजत महोत्सव उद्घाटन
सोलुखुम्बु । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सोलु बहुमुखी क्याम्पसको रजत महोत्सवको उद्घाटन गरे...
स्वार्थसिद्धका फलादेशको पछि नलाग्न ज्योतिष संस्थाको सुझाव
काठमाडौँ । विश्व ज्योतिष महासङ्घ, दक्षिण एशियाली ज्योतिष महासङ्घ र नेपाल ज्योतिष परिषद्ले संयुक्त...
पटक-पटक पिसाब लागिरहे के गर्ने ? के होला कारण ?
१० वर्षीय बालिका बलात्कारको आरोपमा ६८ वर्षीय वृद्ध पक्राउ